Ebe a na-akpọ Logistics Centres Arsiv - RayHaber
Homeụgbọ okporo ígwèUsoro okporo ụzọ okporo ụzọEbe Ndekọ Ngwaahịa
Turkey lọjistik Centers / lọjistik obodo ntà Map
Kars Logistics Center bụ Strategic Importance
Turkey na mmeghe nke Baku-Tbilisi-Kars ụgbọ okporo ígwè akara Kars lọjistik Center maka azụmahịa njem usoro na mpaghara na-emefu Project ndụ. Serhat Kars obodo nke Turkey wuru lọjistik center 's ghọọ a lọjistik isi na mpaghara na ebe [More ...]
Ụlọ Ọrụ Van Logistics Center maka aka uwe a kpochapụrụ!
N'ebe ya, a kpochapụrụ alaka ndị a maka Van Logistics Center Project, nke ga - eme Van otu n'ime obodo ndị kachasị mkpa n'ógbè ahụ na mba ahụ, dịka ebe a na - arụ ọrụ logistics. Ihe oru ngo ahu nke ga - ewusi onodu Van ike ma bulie ya n'usoro aku na uba [More ...]
Minista Turhan: 'Anyị bụ Logistics Base Worldwide'
M. Cahit Turhan, Minister of Transport and Infrastructure, kwuru, sị: taa Taa, anyị nọ ebe mbụ na njem ụgbọ mmiri na Europe. Nke a bụ ọnọdụ na-enye ọṅụ ma dị mma. Dị ka ihe sitere na nke a nile, ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri nwere ike ịlụso ụwa taa na [More ...]
A na-enwe mgbakọ na-ahụkarị na Denizli OIZ
"Echichi na-echekarị Turkey nke Turkishtime na Halkbank nọ na Ngalaba Azụmahịa Haziri ahaziri na Denizli Organized Industrial Zone. A tụlere ikike Denizli OIZ, nsogbu na ihe ndị a ga-ewere. Nzukọ Oche Na-edozi Mmasị OIZI; Halkbank SME Marketing 2. ulo [More ...]
Ọnọdụ ugbu a na Kemalpaşa OSB Logistics Obodo
Turkey si Polat CHP ga-arụnyere na Kemalpaşa ka Omeiwu ajụjụ ndị metụtara expropriation mkpebi n'ihi na mberede mbụ i si Transport lọjistik Village M. Cahit Turhan. Onye otu ndị omeiwu Commission on Environment, Onye òtù CHP IAC na Izmir Deputy Mahir Polat [More ...]
Kahramanmaraş Türkoğlu Logistics Center malitere Ọrụ
Türkoğlu Logistics Center, nke dị oke mkpa maka ịba uru dị ukwuu maka mbupụ nke Kahramanmaraş na mpaghara ahụ, malitere ọrụ ya. Ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ọnụ nke Ụlọ Ahịa nke Commerce na Ụlọ Ọrụ (KMTSO) bụ otu n'ime akụkụ kachasị mkpa nke ọrụ, 1,9 [More ...]
Obodo ntinye ahia di iche iche nke West Mediterenia na ebe a na-eme njem njem
Taşıma West Mediterranean Logistics Center na njem Ụgbọ njem "nke Ụlọ Akwụkwọ Süleyman Demirel haziri site na onyinye nke Keçiborlu Municipality nọ na Keçiborlu Municipality Cinema and Culture Center. Oge mbụ nke ogbako ahụ bụ Keçiborlu Mayor Yusuf Murat Parlak, Onye isi oche nke SDU [More ...]
Tekkeköy Logistics Center, nke bara uru $ 300 Nde, ga-abụ mkpofu
Turkey Samsun wuru 50 nde euro (banyere 300 nde pound) eri 'lọjistik Village' oru ngo nkịtị nọ ikpe gbara akwụkwọ mkpebi kagbuo ntọhapụ nke soro ikpe gbara akwụkwọ site na Agricultural Engineers Chamber sonuçlandı.mahk ntaghari ohuru, ewu 1. klas ala oru ubi a na-eme [More ...]
Ụmụ akwụkwọ nke Ondokuz Maynds University Terme High School Trade Trade Programme gara Samsun Logistics Center na Samsun TSO. Ọ na-emejuputa atumatu na nchikota na European Union Mbon na Turkey [More ...]
Minista Turhan, Konya YHT Terminal na Logistics Center nyochaa
Minista na Ụgbọọrụ Mehmet Cahit Turhan, Konya Logistics Centre na Train Speed ​​Speed ​​(YHT) emeela ihe ngosi na iwu ụlọ. Minista Turhan, maka nleta ụfọdụ na nchọpụta bịara na mbụ n'obodo, Konya High Speed ​​Train Station [More ...]
Mmezu nke ozi na Palandöken Logistics Center Job Result
TCDD 4 Regional Directorate Mmecha nke ozi ala na Palandöken Logistics Center Job Result of Tender Turkish State Railways Administration 4. TCDD 2018 Regional Directorate nke TCDD 597670 / 11.120.341,57 RCC dị na Palandöken Logistics Center. [More ...]
OSB na Ndekọlọtọ Conference si Soma TSO
Soma Chamber of Commerce and Industry haziri site na onyinye nke Soma Soma Fatih ọrụ aka na nka na ụzụ Anatolian High School Haziri Industrial Mpaghara na lọjistik Promotion Conference ẹkenịmde na òkè ọrụ n'aka. Gọọmenti Goma bụ Ahmet, ogbako a na-enwe na Soma Municipality Assembly Meeting Hall [More ...]
Sahin nwere Project Metro
Isi obodo Gaziantep Metropolitan Municipality Fatma Sahin, 31 March na nhoputa ndi ochichi obodo ga eme ma oburu na a choputara, o kwuru. Sahin na-akọwa nkwupụta ntuli aka, kent Anyị ga-achọ ịnọgide na-eme Antep dị obodo nke kwesịrị icheta nna nna anyị na ndị nwụrụ anwụ. Gaziantep bụ obodo dị otú a [More ...]
Tekirdağ Gọvanọ na-aga nzukọ Yildirim Logistics Center
Tekirdag Governor Aziz Yildirim Mọsko, Süleymanpaşa district nke ógbè; ẹdude ọdụ ụgbọ mmiri, ụgbọ njem akụrụngwa, lọjistik ụlọ ọrụ na-elekwasị anya ọzọ ịrụ ọrụ nke ọma ma dị irè ojiji nke lọjistik ohere na a ebe ga-ekwe ka mmepe nke aku na uba nke mba anyị na mkpebi siri ike nke ihe nlereanya [More ...]
Apaydın nyochare okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè Konya-Karaman High Speed
TCDD General Manager İsa Apaydın 29 January 2019 Na Tuesday, ọrụ Konya-Karaman High Speed ​​Railway; Ereğli na Çumra na-ewu ụlọ, Karaman Garı na Konya ka na-arụ ọrụ na YHT Rail na Kayacık Logistics Center. [More ...]
Apaydın, Konya YHT Station na Logistic Center Nyocha
TCDD General Manager İsa ApaydınYHT Train Station na Kayacık Logistics Center, nke na-arụ ọrụ ugbu a na Konya, mere nyocha ma nweta ozi gbasara ọrụ. Konya YHT ọdụ Konya Wheat Market [More ...]
The KTO President Gülsoy aku na uba mbono na arịrịọ nke Turkey Gwara
Kayseri Chamber of Commerce (CTO) onyeisi oche Omer Gülsoy, Prime Minister Recep Tayyip Erdogan abuana ke Turkey aku na uba mbono na ọnụnọ ya. Turkey Union of Chambers na Commodity Exchanges (TOBB) President Rifat Hisarcıklıoğlu n'ụlọ, ẹkenịmde ke TOBB Ejima ụlọ nche [More ...]
Mmecha nke ozi na Palandöken Logistics Center
TCDD 4 Regional Directorate Mmecha nke ozi ala na Palandöken Logistics Center Job Result of Tender Turkish State Railways Administration 4. 2018 / 597670 uru ókè ala 8.339.955,00 TL na ihe ruru. [More ...]
Gọvanọ Ayhan: ir Anyị chọrọ ịchịkọta ikike na Sivas Val
Sivas Gọvanọ Office na-edu ndú nke stakeholder òtù 'nkịtị amamihe Echi' nke ga-ẹkenịmde ke December 26 2018 na slogan onye njikwa oge nzute ẹkenịmde ke Sivas Cumhuriyet University Onodi. Salih Ayhan, Gọvanọ Sivas, kwuru okwu mmalite nke nzukọ. [More ...]
Site na President Erdoğan gaa na Konyalılara Metro Gospel
President Recep Tayyip Erdoğan gara ememe mmeghe nke ngwongwo nke 1 ijeri XnUMX nde pound tinyere itinye ego nke obodo Konya Metropolitan. "Hz. Mevlana batara ikwu na ị gaghị aga, '"ka o kwuru, sị President Erdogan, aka efu na Konya. [More ...]
Mpaghara OIZ Osimiri Black Sea na nzukọ Samsun
Haziri Industrial Ikpehe Upper Isi (OSBÜK) haziri site Black Sea Region alo 56 OSB Nzute ẹkenịmde ke Samsun na mpaghara na ufiop òkè. N'oge nzukọ ahụ, a na-edozi nsogbu, ngwọta na atụmanya nke OIZs n'ógbè ahụ n'otu n'otu. [More ...]
Minista Varank na Samsun Logistics Center
'Samsun, na-eto eto na teknụzụ' bụ Mayor Zihni Sahin, bụ Minista Ahịa na Nkà na Ụzụ nke Mustafa Varank kwadoro, Samsun kwuru. Mayor Zihni Şahin kwadoro Minista Minister Mustafa Varank Minista ahia na Technology Mustafa [More ...]
Izmir Chamber of Commerce (Iztok), atụmatụ ndị e hiwere na Kemalpasa lọjistik Village Project, "Logistic Haziri Industrial Mpaghara" e zutere na Industry na Technology Minister Mustafa Varank maka oruru na ọnọdụ. Iztok onyeisi oche Mahmoud Özgener, nke na-enwe nzukọ nke Ozi [More ...]
Ndi Ntuzi nke Samsun Logistics Village Meets
Zihni Şahin, onyeisi obodo nke Samsun, kwuru, sị, Belediye Logistics Village bụ ezigbo ihe nlele maka usoro mmepe akụ na ụba. Anyị dị njikere itinye aka anyị n'okpuru nkume koy. Ndi Ntuzi nke Samsun Logistic Village [More ...]
Site na İZTO ka Kemalpaşa Logistics Village Break
Izmir Chamber of Commerce (IZTO), Nọmba November na Nzukọ Ezumezu nkịtị, a na-atụle nsogbu akụ na ụba kacha mkpa na nke ugbu a. A gwara otu n'ime ha banyere mmalite nke kọntaktị Ankara banyere usoro ọrụ nke ụlọ ọrụ Logistic na-amalite na Kemalpaşa. [More ...]
Maritime Transport na Communications Minister Ahmet Arslan, nke na-atụ anya na-arụmọrụ site mmeghe nke lọjistik Center Turkoglu, ọ bụrụ na ọ nwere ike iwere n'ime ọrụ, ọhụrụ ịga nke ọma akụkọ na-dere. Ụlọ ọrụ Kahramanmaraş ga-eme mgbanwe na nkwụsị na ụgwọ njem na nnweta. 2 kwa afọ [More ...]
Tekkeköy Turkey si lọjistik Center Bụrụnụ Abịawo
Mayor Togar'dan, Rector Visits Mayor Hasan Togar OMU Rector nke Tekkeköy. Dr. Prọfesọ Dr. Sait Bilgiç na Rector nke University of Samsun Dr. Ọ gara Mahmut Aydın. Ka e guzobere mahadum mbụ nke Samsun na President Recep [More ...]
CHP Gürer: "Olee mgbe Minista Ụgbọ njem ga-eru Niğde?
CHP Nigde Deputy Omar Fathi Gürer, ọ bụ ezie na a kọwara na Plan na emefu ego Commission nke Ministry of Transportation na Infrastructure Nigde na-eme na-ahụkarị uko na-egbu oge ego oru na ógbè wetara burukwa ike nabata ọtụtụ afọ. Gürer, Minista Cahit Turhan, 7 [More ...]
Ụlọ Konya YHT na Ebe Ndekọlọtọ na-akwụsị
TCDD General Manager İsa Apaydın, YHT Train Station na Kayacık Logistics Center, nke a na-ewu ugbu a, nọ na Konya. Apaydın, YHT Station na Logistics Center, nke na-agwa ndị sonyere banyere ọmụmụ ihe, dị mkpa maka okporo ụzọ na Konya. [More ...]
Ewubere Obodo Nlekọta Obodo na Kemalpaşa
Turkey mbụ atụ nke a lọjistik n'obodo nta, na ịbụ iwebata Izmir Gulab lọjistik Center oru ngo, Spiller lọjistik Ụyọkọ ẹkenịmde site Council of oru buu igba n'ulo. Fevzi Akay, President nke Ege Global Logistics Investments, gara nzukọ a na-eme na İzmir Customs Brokers Association. [More ...]